wsm. logoရပ် ဖြေရှင်းနည်း စုစည်းမှု « XMS-MMF
wsm. logoရပ် ဖြေရှင်းနည်း စုစည်းမှု
Firstly, shut down the phone. Then
As soon as you see Mi Logo, press power button until the phone is vibrate. And then you need to press power button4times within4seconds and at each time, phone must be vibrate
3. And then, wait5mins and sometime it will take longer but finally, phone will be successfully pass this boot loader.
This is to stop loading wsm tools and to bypass the boot loader
Credit : someone from forum
1. Download http://www.mediafire.com/download/ggsuxd91srwcthp (4.17 KB, Downloads: 13) and place it inside your sd card
3. Hold vol up + vol down and switch your phone on! 4. After you seeablack screen guide yourself to recovery
5. Go to install zip from sd card and install this file and your problem is fixed :) so no need to flash your firmware! ========================
Credit : Ko Tin Htay Aung
- Totally switch off power
- wide all data from recovery
PS: forgot to copy exact instruction from his post. Need to replace with actual instruction
Credit : Ko Kyat Ka Lay
tools နဲ့ Xposed Installer ဟာ အတူတူပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ် MIUI Rom တွေမှာ
WSM tools ကိုသုံးကြပြီး တခြား rom များမှာတော့ Xposed Installer ကို သုံးကြပါတယ်။ သဘောတရားအနေနဲ့ တော်တော်များများမှာ လုပ်ဆောင်ပုံခြင်းတူသလို ပြောင်းပြီးလည်း သုံးလို့ ရပါတယ် တကယ်ဆို သူတို့ နှစ်ဦးကဘာလည်း ဘယ်မှာသုံးကြမှာလည်း လို့ မေးလာရင်တော့ သူတို့ကို သုံးရတာမဟုတ်ပေမယ့် သူတို့ မပါရင်မပြီးတာပါလို့ပဲ ပြောပါရစေ ....
ကွန်ပျူတာ တလုံးမှာ Dotnet Framework တို့ Java တို့ရှိရန်လိုအပ်သလိုမျိုး WSM Tools နဲ့ Xposed Installer ဟာလည်း Android OS အတွက် တထောင့်တနေရာကနေ လိုအပ်နေပါတယ်။ သူတို့ဟာလည်း Android Phone တွေထဲက Modules တချို့ကို run ဖို့ရာ လိုအပ်တဲ့
Framework ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဘယ်လို ဟာတွေ ကို အတွက်ဖြစ်မလည်းလို့ မေးလာခဲ့သည်ရှိသော် ဖုန်းတွေထဲက error တွေတော်တော်များများကို ပြန်ပြင်ပေးဖို့ ထုတ်ထားတဲ့ fix တွေ ပါဝင်နေလို့ပါလို့ ပဲ ပြောပြမိပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆို Google Maps SDK Drifting Fix
for China,HTC Car Mode, HTC Gesture Modifier(M8) အပြင် ကျွန်တော်တို့ Android Phone တွေရဲ့ Carrier Name ချိန်းတာတို့ တခြား setting ပြင်တာတို့တွေကိုပါ လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ တခြား Samsung, Sony နဲ့ တခြား Brand တွေအတွက် error ရှင်းပေးတာတွေ အများကြီးမှ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် ကျွန်တော်တောင် အားလုံးကို မဖတ်ရသေးပါဘူး ခင်ဗျာ။ အဲ့ဒါကို သုံးကြည့်ချင်ရင်တော့ https://www.mediafire.com/?fy7rnu52m75i6p1အဲ့ဒါလေးကို
ဒေါင်းပြီးတင်ပါ ... တင်ပြီးရင်တော့ Xposed Installer ကိုဖွင့်လိုက်ရင် Framework နေရာမှာ နီနေပါ့မယ် အဲ့ထဲဝင်လိုက်ရင်တော့ Install/Update တို့ Uninstall အစရှိတာလေးတွေကိုတွေ့ရပါမယ် အဲ့မှာ Install/Update ကိုနှိပ်လိုက်ရင် သတိပေးစာတမ်းလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် OK ဆိုရင်တော့ reboot ကျသွားပြီး ပြန်တက်လာရင်တော့ Xposed Installer တင်ပြီးတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်သွားပါပြီ။ ဘယ်လိုသုံးရမလည်းဆိုရင်တော့ Xposted Installer ထဲဝင်မယ်ပြီးရင် Download ထဲမှာ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တာလေးတွေ ရှာမယ် ပြီးရင် ဒေါင်းမယ်ပေါ့။ ဒေါင်းလို့ ပြီးသွားရင် အဲ့ဒေါင်းပြီး install လုပ်သွားတဲ့ ဟာလေးတွေက Modules ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် အဲ့ထဲကို ပြန်ဝင် ပြီး run ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် reboot လုပ်ပြီးရင် ခုန Module ထဲက ဟာလေးတွေဟာ active ဖြစ်သွားပါပြီ။ လိုသလိုအသုံးချတော်မူကြပါကုန် ...
ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပြဿနာတခုရှိပါတယ် အဲ့ဒါကို အဓိကပြောချင်လို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးတာပါ
tools နဲ့ Xposted Installer ကို သွင်းပြီး Framework ကို Install လုပ်တဲ့
အချိန်မှာ အန္တရယ် အရမ်းများပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါသလည်းဆိုတော့ Phone reboot လုပ်ပြီး ပြန်အတက်မှာ Logo ကနေ ဆက်မတက်တော့တဲ့ အခြေအနေ တော်တော်များများကြုံတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲ့လို တွေ့လို့လည်း စိတ်မပူပါနဲ့ အားမငယ်ကြပါနဲ့ http://www.mediafire.com/download/ggsuxd91srwcthp
ဒီဖိုင်လေးကို ဒေါင်းပြီး ဖုန်းရဲ့ SD ထဲပဲ ဖြစ်ဖြစ် Internal ထဲပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထည့်ပြီး ဆောင်ထားလိုက်ပါ။ တကယ်လို့ Logo မှာ တင် ရပ်နေပြီဆိုရင်တော့ အပေါ်က zip ဖိုင်လေးကို Recovery mode ထဲကဖြစ်ဖြစ် CWM ထဲကဖြစ်ဖြစ် Flash လိုက်ပါ ပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ် ......
By Khaing Su Hlaing Credit to : Ko Heureux Nyan